Inona no mahatonga ny olona mahasarika. Mampiaraka Psikolojia
Rehefa mandre ny teny hoe»tsara tarehy», mihevitra angamba ny vehivavy. Fa angamba ianao efa nahita izany efa ao fa mamaritra ny lehilahy, ohatra, dia»tsara tarehy ny olona»na»sexy karazana.»Ny dikan’izany. Inona no mahatonga ny olona mahasarika. Alaivo sary an-tsaina, afaka hampitombo ny vehivavy dia mora kokoa ny fandriana ny ady, ary hitondra ny tantaram-pitiavana, ara-nofo dia manintona anao rehefa afaka minitra vitsivitsy. Alaivo sary an-tsaina, mahazo foana nilaza fa ianao tsara tarehy, tsara tarehy, tsara tarehy, ary ny hafa rehetra tsara ny zava-drehetra ary afaka mahazo ny vehivavy na aiza na aiza alehanao. Ndeha isika haka ny Tena fomba fijery. Raha toa ianao ka ny fotoana sy ny ezaka, mifantoka, ary hisy na inona na inona ny zava-misy manintona, afaka manana ny rehetra ny tombontsoa lehilahy manan-karena — mahafinaritra ny trano, ny fiara raitra sy ny Toerana ambony ao amin’ny orinasa lehibe iray fa efa ho ny tsy fahombiazana amin’ny vehivavy. Raha toa ianao ka amin’ny lafiny iray hafa rehetra ny fotoana sy ny hery ho azy ireo, mifantoka amin’ny toetra ny olona ary na inona na inona mba ho ao an-fananana, dia mety ho hitanao fa mipetraka ao anaty Trano kely amin’ny birao tsotra asa, fa tsy manana Daty isan-kerinandro miaraka amin’ny vehivavy hafa, ary ny tsirairay amin’izy ireo dia tanteraka ADALA ny momba anao. Tsara tarehy aho antoka fa hahazo ianao tsy misy ny Tafahoatra. (Na, fara fahakeliny, manantena aho fa izany no izy.) Fa izaho efa nitondra ity fampitahana mba hanehoana ny hevi-diso fa olona maro no momba ny hevitry ny hoe»tsara tarehy»: Ny fahadisoan-kevitra izany, mba manana fahombiazana amin’ny vehivavy, tokony ho mpanan-karena. Satria izay vehivavy amin’ny zavatra hafa dia nahasarika matetika. Nifanena tamin’ny maro manan-karena ny olona izay mbola Tokan-tena sy ny manirery, ary ny ara-dalàna thickening ny faran’ny izay milomano saika ao amin’ny vehivavy. (Ary angamba koa.) Fa eto dia ny vaovao tsara: tsy maintsy eo fanambinana sy ny vehivavy manapa-kevitra. Misy ihany koa ny lehilahy, ny manan-karena SY ny fahombiazana amin’ny vehivavy ary misy ny olona, ny Tapaka SY tsy nahomby amin’ny vehivavy. Ny hafatra tiako hampitaina aminareo: Ny vola no ampiasaina mba hanampy anao amin’ny vehivavy, nefa irery dia tsy ampy. (Ary, amin’ny toe-javatra sasany, dia mety hanimba ny mety amin’ny vehivavy na dia bebe kokoa.) Ny antony maro ny olona no diso hevitra momba ny vola sy ny vehivavy, noho izany dia»mora kokoa». Ho an’ny olona maro izany dia mba hanangonana vola mora noho ny hiasa amin’ny tena mba ho tsara ny amin’ny vehivavy — tsy misy fihetseham-po ny asa, tsy misy fiovàna, tsy misy Hanafoanana. Ary mihevitra fa raha vao manana fiara raitra, ny vehivavy dia mora. Tonga saina ianao tara loatra fa raitra fiara mampiaiky ny vehivavy ihany amin’ny voalohany mitaingina. (Koa, tonga saina ianao tara loatra fa raitra fiara dia hisarihana bebe kokoa ny LEHILAHY saina. Aza manao izany fahadisoana lafo vidy. Raha toa ianao Ny vehivavy ny volana, tsy maintsy ny tenanao ny asa — mba ho tsara tarehy ny olona. Ny vehivavy dia mahatsapa avy hatrany dia nahasarika mba anao, ary ianao tsy ho mafy toy izany ny tsy maintsy miasa mba mahazo Na dia ny tena sexy, tsara tarehy ny vehivavy, dia manomboka mahita anao, ary ianao be dia be mafana sy misokatra kokoa ny mahazo noho ny eo ho eo ny olona iray, Raha toa ianao bandy eo ho eo, dia amin’ny tsara indrindra hafahafa, amin’ny ratsy indrindra azo atao, ny hanova Daty avy amin’ny namana ny firaisana ara-nofo fa raha ianao sexy, dia ho mora kokoa ary mahatsapa voajanahary. Raha izany rehetra izany feo tsara ho anareo, dia aoka tsy mandany fotoana bebe kokoa sy hiatrika ny olana. Mba ho toy ny manintona be ny fotoana sy ny asa, dia tsara kokoa raha toa ka ny faritra amin’ny fiainanao ve ianao mifantoka amin’ny izay manana ny fiantraikany lehibe indrindra eo amin’ny tarehy. Aza be loatra sy hanova ny akanjo indray — hanatsarana anao tsikelikely rehefa mandeha ny fotoana. Ny fifantohana dia mila eo amin’ny sehatry ny fanatsarana indrindra. Izany mba hifanaraka amin’ny hevi-dehibe ao ambadiky ny zava — be no avy, ny tsara sahaza no ao.
Alaivo sary an-tsaina ny fomba Amerikana Cowboys handeha amin’ny malalaka gait, izay miala kely ny toerana eo amin’ny tongony. Fara fahakeliny, ny vehivavy ny fahatsapana fa misy zavatra tena Manokana dia teo amin’ny tongony. (Adala, fa tsy miasa — andramo izany.). Ny vatana ny teny. Midika izany masony sy fihetsika mitory fitiavana fifandraisana izany. Noho ny hitsin-dalana, mijery sarimihetsika amin’ny manintona indrindra ny lehilahy mpiantsehatra (Marotoa Film Ranomasimbe s Iraika ambin’ny folo, raha vitsivitsy ihany no tena mahasarika ny olona efa ho taona ela Fiofanana ao aminy sexy. Ny tena mahatsapa fa tena teny dia ny Tsiky. Andramo izao: Asio Tsiky eo amin’ny tavanao kosa ianao purses ny molotra. Izany dia mampitodika dia ny Tsikinao, ny sexy, raha mbola mafana sy namana tarehiny. Volombava, na tsy misy volombava. vehivavy mahatsiaro ho tena tia olona efa ampy taona mba mitady, mianatra mba ho eo amin’ny fiainana, nefa tsy antitra LOATRA. Ka raha ianao tapaky ny volana, get a Volombava, raha ianao no ho miakatra, dia tsy hanaratra anao tanteraka. Mijery sarimihetsika, ny efa matanjaka, sexy lahy andraikitra. Tsarovy ny lalina, tsara tarehy ny feo mampiasa, ary ny vehivavy kosa ny lohany mba hijery hoe iza izany miresaka izany — izany no karazana Dity izay te-hanatratra.
Mba ho tsara conversationalist dia ny siansa, fa raha te-ho tsara tarehy ny olona, vao hianatra hilalao ny voly eo amin’ny vehivavy ny hifantoka amin’ny an-ianao niresaka momba ny. Ary raha miresaka momba ny tenanao, manao ny Tsara indrindra ao aminy sy hilaza zavatra Mahavariana momba anao, nefa tsy mitandrina izany tsotra, ka dia mihevitra loatra ianao tsara ho anao. Zava-dehibe ny hahafantatra ny zavatra ianao ny miresaka azy.
Izany dia mikasika ny vehivavy handeha mba ho izay izany no mba Manao izay tianao amin’ny alalan’ny fanasana anao ny tantalizing, tsy-ratsy-dalana. Fahatokisan-tena dia midika hoe mba ho tony sy milamina, amin’ny fotoana rehetra, na ara-pihetseham-po na hanamaivan-danja ny vehivavy. Ka mianatra ny ho tsy voatery ho hanorina fahatokisan-tena. Eo amin’ny toetra amam-panahy valin. Samy hafa ny vehivavy dia mampiseho ny fahalinana amin’ny fomba samihafa. Ny vehivavy sasany dia manome hamantatra izany an-kolaka — hanome azy ny maloto Tsiky, mba hampisehoana fa manana takatry. Ny hafa fijery dia mazava — hanao azy ho sambatra amin’ny fanomezana azy tsara ny zavatra tiany izy. Manome ny vehivavy izay tiany. Ny tena famantarana ny tsara tarehy ny olona dia ny fahafahan’ny vehivavy aza dia azo antoka sy mora mba hanome izay tiany, ary raha misy vehivavy mahatsapa tia ianao, dia ho hita ao amin’ny toe-javatra momba ny Firaisana ara-nofo tsy ho meloka. Raha toa ka afaka mitana ny zavatra ara-pitaovana, dia lasa soa aman-tsara sexy. Manan-danja koa no antony mahatonga ny ankamaroan’ny olona tsy sexy — manana tsy ny herim-kitapo ny akaiky, na raha toa ny vehivavy iray te, mazava ho azy, ary nandiso fanantenana anao tonga nirohotra. Arakaraka ny fanalahidin ny lehilahy, ny tsy tsara tarehy izy sy ny tsy Fahafahana fa izy dia mbola ho sexy. Izany no tsy misy lisitra feno fa ireo fanalahidy ireo dia hametraka anao mialoha ny fifaninanana — na dia eo anoloan’ny ireo izay manankarena sy ny tsara fanahy kokoa noho ianao. Ny fanamby lehibe indrindra dia ny marina mandeha mivoaka sy fitsapana izay no efa nianatra ny anao hihaona vehivavy. Ho sasany amin’ny fototra manintona — ohatra, tsara ny resaka, na ny vaovao hahatakatra — ny hany azo atao dia ny fampiharana ny any ivelany. Ary izany no mitondra ahy any amin ny farany dia tapa-toro-hevitra ho anareo: Start-ny-maro (ary kokoa) vehivavy tsara tarehy. Miresaka amin’izy ireo na aiza na aiza misy anao hitsena azy, ary izaho dia tsy matahotra ny nolavin’ny — ianao hahazo ny maro ny fitsipahana, fa anisan’ny Drafitra. Ianao foana ao an-tsaina fa tsy mora mba ho no manintona — dia nitondra ahy nandritra ny taona maro ny asa mafy, dia efa nampiasa azy io mba tonga lafatra sy haharitra ianao angamba tahaka ny ela. Mazava ho azy, dia afaka vonjeo ny maro ny volana (na ny taona), amin’ny dia REHETRA ny zava-miafina, mianatra mba ampidiro ny E-Mail adiresy sy ny tsindrio eo amin’ny ‘Ok, andeha isika. Ankoatra izany, ianao dia hahazo maimaim-poana amin’ny alalan’ny mailaka, ny zava-miafina Gazety: ampidiro ny E-Mail adiresy sy ny tsindrio eo amin’ny ‘Ok, andeha isika. Ankoatra izany, ianao dia hahazo maimaim-poana amin’ny alalan’ny mailaka, ny zava-miafina ny Gazety
← Chatroulette Lahatsary amin'ny Chat Download sy ny Fametrahana ny Android
Fihaonana Iray ny Olona Izay Te Hanambady →